ပို့စ် ခေါင်းစဉ်ရွေးနည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပို့စ် ခေါင်းစဉ်ရွေးနည်း
Posted by သုရှင် on Aug 27, 2012 in Copy/Paste | 11 comments
ပို့စ် ခေါင်းစဉ် ကောင်းကောင်းရွေးမယ်
သိကြတဲ့အတိုင်း ပို့စ် ခေါင်းစဉ် ဆိုတာ ပို့စ် တစ်ခုရဲ့ အသက် ခင်ဗျ။ ကိုက အောက် က စာသားတွေ ဘယ်လောက်ကောင်းအောင်ရေးထားရေးထား ခေါင်းစဉ်နဲ့ တက်Tag မှာ လူအများကို ဆွဲဆောင်မှု မရှိဘူးဆိုလို့ကတော့ အဲဒီပို့စ်မှာ comment တစ်ခုတောင် လာပေးဖို့မရေရာတော့ပါဘူး။ ဆိုတော့………. ပို့စ်ခေါင်းစဉ် ဟာ တော်တော်အရေးကြီး တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
၁- target ရွေးတတ်ရပါမယ်။
ဆိုလိုတာက ပို့စ် တင်တယ်ဆိုတာ ဈေးကွက်ထဲကို ကိုယ့်ရဲ့ product တစ်ခု ချပြရသလိုပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပို့စ်က ဘယ်သူတွေကို အဓိက ရည်ရွယ်ပါသလဲ။ ဒါကို တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်က ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကို ကိုယ့်ပို့စ်ကို ဖတ်စေချင်တာလဲ။ လူငယ်လား၊လူကြီးလား၊ အပေါ့ဖတ်လား၊ အလေးဖတ်လား။ယောက်ျားလား၊မိန်းမလား။အပျိုလား။လူပျိုလား၊အိမ်ထောင်သည်လား၊ကျောင်းသားလား၊ဘာသာရေးလား။ ဖျော်ဖြေမှုလား၊အပျော်ဖတ်လား၊ ဟာသ လား။ ပညာပေးလား။ ဒီလို ကိုယ့်ဖာသာကို စီစစ်ပြီး ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
၂- စိတ်ဝင်စားစရာ ခေါင်းစဉ်ပေးတတ်ရမယ်။
ဥပမာ..၁။ ကိုယ်က ဘာသာရေးအကြောင်းပြောချင်နေတာ ဆိုရင် ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို…
ဘာသာရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ လို့ပေးလိုက်မယ်။ ဒါဆိုရင် ဘာသာရေးကို ( စာလေးပေလေးကြီး အမြင်ဖြင့် မဖတ်ချင်သူများ ) စိတ်မ၀င်စားစွာကျော်သွားပါ လိမ့်မယ်။လူကြီးတွေနဲ့ ဘာသာရေးအကြောင်း သိချင်၊၀င်ပြောချင်တဲ့ သူတွေ သာလျှင် ထိုပို့စ်မျိုးကို စိတ်ဝင်တစားဝင်ဖတ်ပါလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြင့် လူငယ် ကောင်လေးကောင်မလေးများက တေ့ာ ဖတ်ခဲလှပါတယ်။
ဘာသာရေးအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း၊ ဘာသာရေးနှင့်လူငယ်။ ဘာသာရေးဆိုတာ၊ လေ့လာသင့်သည့်ဘာသာရေး၊ ဘာသာရေးဘာလဲဘယ်လဲ။ စသည်ဖြင့် ပေးနိုင်ကြပါတယ်။
ဥပမာ..၂၊ကိုယ်က အချစ်အကြောင်းကို ပြောချင်နေသည်ဆိုပါစို့။ ကိုယ့် targetက လူငယ်လူရွယ် လူပျို၊မိန်းမပျိုလေးများ ဖြစ်သောကြောင့် အနည်းငယ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပို့စ် ခေါင်းစဉ်ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ဤသို့သော ခေါင်းစဉ်များကို ပေးခြင်းအားဖြင့် စာဖတ်သူ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို လျှော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
ရည်းစားရှိဖူးသူမဖတ်ရ ( ကိုယ်တွေ့ပါ) ၊ရည်းစားထားသူဒို့ရန်သူ ၊ရည်းစားထားခြင်းနှင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ၊ရည်းစားတစ်ထောင်လင်ကောင်တစ်ယောက် ၊ စသည်ဖြင့်…
ထိုသို့လေးပင်နေသော နာမည်များကို ပေးမည့်အစား
ငယ်ကချစ်အနှစ်တစ်ရာ။ အချစ်ဦး။ လမ်းခွဲသွားပေမယ့် လွမ်းဆဲ ပါ မေ…။ ပြဒါးတစ်လမ်း သံတစ်လမ်း၊ ချစ်ခြင်းဖွဲ့အလင်္ကာ။ အချစ်ဆိုတာ။ အကြွေပန်းပေမယ့် ရင်ထဲအထိမွှေးဆဲပါ။ စသည်ဖြင့် ပေးသင့်ပါသည်။
ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ပေးရာတွင် အခြေအနေအချိန်အခါကိုလည်း စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ လူမျိုးရေးအခြေအနေ၊ဘာသာရေးအခြေအနေ၊ စသည်တို့ကိုလည်း တွက်ချက်သင့်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိ၏ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်သည် အငြင်းပွားဖွယ် အကြောင်းအရာ တို့ကို ရည်ညွှန်းထားပါက..ပြဿနာ အမျိုးမျိုးကို လက်ယက် ခေါ်နေသကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ။ မြန်မာပြည်သည် ဗမာလူမျိုးတစ်ခုတည်းအတွက်သာ ဖြစ်နေပြီလော ဟူသော ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပါ။ စာဖတ်သူဟာ ဗမာ ဖြစ်နေပါက..စာကို ဆုံအောင်ပင် ဖတ်မည် မဟုတ်ချေ။ အဆဲခံရမည်မှာ ကြိမ်းသေဖြစ်ပါသည်။လူမြင်ပါက အရိုက်ပင်ခံရကိန်းရှိပါသည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ တန်းတူအခွင့်အရေး သို့ဆိုလျှင် နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားသူ တိုင်းရင်းသားရော ၊ ဗမာတွေပါ စိတ်ဝင်တစားဖတ်ကြလိမ့်မည်။ အဆဲခံရခြင်းမခံရခြင်းကတော့ ပို့စ် အထဲတွင် ပါဝင်ရေးသားထားသော စာသားများအပေါ်တွင် သာမူတည်ပါသည်။
စာရေးသူဟာ ဖတ်သူကို စေတနာထားရပါမယ်။ သန့်ရှင်းသော စေတနာဖြင့် ဗဟုသုတ ရစေချင်လို့ပင်ဖြစ်စေ။ ရယ်စေချင်လို့ပင်ဖြစ်စေ။ ရဿ တစ်ခုခုကို ပေးလိုလျှင်ဖြစ်စေ။လှပသော ရှုခင်းတို့ကို ကြည့်ရှုစေချင်လို့ဖြစ်စေ။ တစ်ခုခုကို မျှဝေချင်လို့ပင် ဖြစ်စေ ရိုးသားရပါမယ်။ သို့မဟုတ်ပါက စာရေးသူရော ဖတ်သူရောအကျိုးမရှိ အချိန်ကုန် သွားတာဘဲ အဖတ်တင် ပါလိမ့်မယ်။ လူမျိုးအချင်းချင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်စေခြင်း ၊ ငြင်းခုန်စေခြင်း ၊ အတိုက်အခံဖြစ်စေချင် ခြင်းကြောင့် အဖြတ်သဘောဖြင့် မည်သို့သော ပို့စ်ကို မှ တင်ရန် မသင့်ပါချေ။ ( အဆဲခံရမည် ) ။ ရခိုင်မှာဖြစ်သော ပြဿနာ များကြောင့် ယခု အချိန်တွင် ပိုဆိုးပါသည်။
၄-အကြောင်းအရာအပေါ်မှန်ကန်မှုရှိခြင်း နှင့် စာလုံးပေါင်း
ရမ်းတုတ်ထားသော ပို့စ်များကို ဖတ်ရသည်မှာ ပေါ့ပျက်ပျက်ဖြင့် ဘာမှ အကျိုးမရှိနိုင်ပါချေ။ ခိုင်မာသော အထောက်အထား၊ ဓါတ်ပုံ ၊ သတင်း စသည်တို့သည် ဖတ်သော သူတို့အတွက် အကြောင်းအရာ မှန်ကန်မှု ၏ အသက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မိမိ ပြောလိုသော အကြောင်းအရာ ။ အဖြစ်အပျက်အကြောင်း ဃ ဃ ဏ ဏ သိဖို့လိုအပ်ပါသည်။ စာလုံပေါင်းမှားခြင်း ။ ပို့စ် အဆုံးထိ မပါခြင်း၊ တစ်ခါတစ်လေ ဘာမှပင်ပါမလာခြင်း။ စသည်တို့သည် စာဖတ်သူအတွက် လွန်စွာမှ စိတ်ရှုပ်ထွေး စိတ် ညစ်ညူးစေသော အကြောင်းအရာများဖြစ်ပါသည်။
ပို့စ်ခေါင်းစဉ် လှလှလေးတွေ ပေးပြီး စာဖတ်သူတို့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါစေ ဗျာ။
( သိသလောက် ဆရာကြီး လုပ်ထားသည် ၊ အမှားပါက သိသော တတ်သောသူများ ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါသည် ခင်ဗျား )
ကဗျာယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင် ကောင်ဆိုတော့
ကာရန်လေး ငြိပြီး ရေးမိ ပေးမိ တတ်ပါဂျောင်း …
ဒီရွာကြီးထဲမှာ ဖတ်တဲ့လူတွေ ကတော့ဖြင့်
တစ်နေ့တစ်နေ့ တက်လာတဲ့ ပို့စ်တွေကို ဖတ်ကြတာပဲ …
ဘာပို့စ်ရယ်လို့ ခွဲကြပါဘူး ..
ခံတွင်းတိုးရင် မန့်ကြတာပေါ့ဗျာ … အထင် ..
အားနေရင်တော့ တင်သမျှစာတွေ အကုန်လိုက်ဖတ်နေမိပေမယ့် သိပ်မအားတဲ့အခါကျတော့ တချို့ပိုစ့်တွေကို ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး ကျော်သွားတတ်လို့။
(မြန်မာပြည်သည် ဗမာလူမျိုးတစ်ခုတည်းအတွက်သာ ဖြစ်နေပြီလော) ဆိုတဲ့အစား … (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ တန်းတူအခွင့်အရေး ) လို့ ပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဥပမာလေးက အတော်ထိရောက်တယ်။
စကားအတင်းစပ် ပြောရရင်ဖြင့် ခေါင်းစဉ်ပေးနည်းကို ဂဃနဏ သေသေချာချာ ဥပမာ ဥပမေယျတွေနဲ့ ရေးပြသွားတာ စိတ်ဝင်စားစရာ နည်းယူစရာပါပဲ။
ဂနဲ့ဃအသံထွက်နီးစပ်ပေမဲ့.. ဂသည် နမဟုတ်ဆိုတာ.. ခွဲသိဖို့..
နသည်… ဏနဲ့.. အသံထွက်နီးစပ်ပေမဲ့.. န သည်.. ဏမဟုတ်..ဆိုတာခွဲသိဖို့..
သတင်းသမားတွေမှာ.. သတင်းခေါင်းစဉ် အင်မတန်အရေးကြီးတယ်… လေ့လာဖူးပါတယ်..
မြန်မာပြည်က.. အင်္ဂလိပ်သတင်းအပါအ၀င်..မြန်မာသတင်းတွေရဲ့.. သတင်းခေါင်းစဉ်ရွေးဟန်ဟာ.. ရှေးဂွမ်တိဂွမ်တိ.. ပုံစံဖြစ်နေသတဲ့..
သင်ပေးတဲ့ဆရာတွေ.. လက်ဆင့်ကမ်းသတင်းသမားတွေကလည်း.. ဂွမ်တိဂွမ်တိခေတ်က.. သတင်းသမားတွေလေ..
ပြောရင်းနဲ့ သဂျီးလည်း မှားရေးမိသွားပြီ။
“ဂနဲ့ဃအသံထွက်နီးစပ်ပေမဲ့.. ဂသည် နမဟုတ်ဆိုတာ..”
ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်၊ သိပေမဲ့လည်း အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့
ဆော်ရီးဗျာ ဆရာကြီး ၀င်လုပ်တဲ့သူက မှားရေးတော့
၀ိုင်းတော့ မဟားကြပါနဲ့။ ဟဲဟဲ
ဂဃ နဏ …ဆိုပြီး ပြင်လိုက်ပါပြီတဲ့ဗျာ။:mrgreen:
ဂဇက်ကိုဖွင့်လို့ရတဲ့အချိန်တော့ တော်တော်များများဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။မန့်ဖို့ကတော့ အတော်ကြိုးစားရတာ၊ တခါတလေ လော့အင်ဝင်တာက လေးဆယ့်ငါးမိနစ်၊ တစ်ခုမန့်တာတက်ဖို့ နာရီဝက် ဆိုတော့ကာ…. စာတစ်ပုဒ်နဲ့တစ်ပုဒ် ပြောင်းတာတောင် အတော်ကြာတာ။ကောင်းတာကတော့ည ၁၁နာရီကျော်ဆိုတော့
ဟုတ်ပါတယ်… ခေါင်းစဉ်က တကယ်ကို အသက်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မွန်မွန်ကိုယ်တိုင်လည်း ခက်ခဲလှတဲ့ ကော်နက်ရှင်ကြားမှာ ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီး ဖတ်ဖြစ်တာ များလို့ပါ။
အခုလို သေသေချာချာလေး ဖတ်လိုက်ရတဲ့အတွက် ကိုယ့်အတွက်လည်း ခေါင်းစဉ်ပေးတဲ့အခါ ပိုကောင်းလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကောင်းပါတယ် အကိုရေ။အကို့ အကြံပြုချက်လေးးးးးးးး
ကျမကတော့ ခေါင်းစဉ်ကို တကယ်မတင်ခင်ထိ အကြိမ်ကြိမ်ပြင်နေရတာပါပဲ။
ဒါတောင် လှလှပပ ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဆိုတာမျိုး မရေးတတ်သေးဘူး။
ကာရန်လေးချိတ်ရေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတွေဆိုရင်တော့ ပိုကြိုက်မိသလိုပဲ။
ဥပမာ FR ရဲ့ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်။